Milicsiga Heerka Aqooneed iyo Hadimada Maamulihii Madaarka Cigaal. W/Q Siciid Gahayr
Monday November 05, 2018 - 11:55:19 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waa lagu digtaa ruux hadduu, kuu darnaan jiraye
Maqaalkan xuska iyo xurmada ah, oo aan qaybaha ugu badan ka xiganayo qormo uu hore u diyaariyay una faafiyay Eng Maxamed Beddel, waxa aynu ku suntaynnaa waxqabadka iyo waxyeellada dhallinyaro ay xukuumaddii hore u samaysatay dadka Hargeysa/Sallaxley/Balli- mataan, oo caan ku ah "Jin-dagaagay”. Si gaar ah waxa aan maanta u soo gudbin doonaa faallo ku saabsan Maamulihii Madaarka Cigaal Md Maxamed Yuusuf Ismaaciil. Kaas oo maanta la dhaafiyay xeradii uu tagri-falka, xadgudubka, dhaca iyo boobka la dhex soognaa. Waxa loo beddelay Madaarka Berbera oo ay xukuumadda Somaliland ka kiraysay dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta, taas oo ka dhigan tababarkii ciidan ee Saybeeriya la isugu madallufin jiray.
1.Waxa uu door ka qaatay musuqii baahsanaa ee ka dhacay wasaaradda duulista. Caddaymaha arrinkaas maragga u ah waxa ka mid ah bangalaha uu ka dhistay dhinaca bari ee Scandinavian Hotel ee magaalada Hargeysa. Miyaa uu mushaharkiisu dhisi karaa guriga aan sawirkiisa soo bandhigay?
2.Waxa uu ka mid ahaa dadkii doorka ka qaatay in dhul 13KM ah laga qaado deegaanka Masallaha. Kaas oo madaarka lagu ballaadhiyay. Maxamed Yuusuf waxa uu cagta hoosteeda geliyay dadkii rabay in dhulkooda loo qiimeeyo ama dhul beddel loo sameeyo. Marka laga yimaaddo ragga, waxa uu xidhxidhay dumar dumaashi u ah oo inaadeerkii qabo.
3.Waxa uu ka mid ahaa adeegayaashii dartood loo beddelay Wasiirradii ka dambeeyay Maxamuud Xaashi sida Cismaan Cabdillaahi Saxardiid (Caddaani) iyo Cumar Maxamed Faarax. Markii ay xilka wasaaradda duulista hayeen wax ka yar afar bilood ayaa mid kastaba laga beddelay kobtaas. Waxaana sabab u ahaa khilaaf soo dhex galay iyaga iyo diraneyaal wasaaradda lagu sii beertay.
4.Kaalin weyn ayuu ka qaatay isku-dirka xukuumadda iyo dadka deegaanka. Lama tirin karo inta jeer ee uu sharci-darro ku xidhay dad aan waxba galabsan, sirdoonka uu ku wareejiyay ama xorriyaddooda loo celiyay iyada oo aan daw la marin. Saw kama war haysaan gacan-ka-hadalkii, feedhkii iyo duudsigii uu ku sameeyay Majaajilaystaha caanka ah ee Ajakis oo ka shaqeeya Universal TV "Nin dheer oo madaw, malakul-mawd aa mooddo, acuudu billah ayuu lee ahaa” ayuu Ajakis yidhi.
5.Intii uu xilkan hayay waxa uu galay ganacsiyo door ah oo ay ka mid yihiin furitaanka sarrifle ku yaalla madaarka Cigaal iyo in hab xeerka baalmarsan loo dhoofiyo dad u socdaalaya dhul aan ammaankiisu sugnayn.